Ọnwa azụ na ala na otu image | Apg29
Ọnwa azụ na ala na otu image
The Chinese satellite Longjiang-2 photographed ọnwa azụ na ala na otu image.
The oyiyi nke ọnwa na ụwa na otu onyinyo ahụ bụ 4 February 2019. The Chinese satellite Longjiang-2 kemgbe n'azụ ọnwa na-photographed ụwa na yiri ka dị nta na ala nri akuku.
Enweta na ọnwa si dị n'akụkụ
Ikpeazụ nke ọnwa rutere China na ihe unmanned ụgbọala na obere azụ n'akụkụ nke ọnwa na mgbe anya si Earth. Ugbu a, a na foto ọhụrụ si a Chinese satellite were a obere anya ma dum gburugburu n'eluigwe hụrụ n'azụ ọnwa.
Ọ bụghị ya na-adọrọ mmasị! Na eluigwe na Chineke kere, a na-acha anụnụ anụnụ na mbara ala nke anyị bụ ụmụ mmadụ na-ebi ndụ.
Na Chineke na-ahụ anyị ụmụ mmadụ na mbara ala a. Ọ hụrụ ya n'anya ọ bụla n'ime anyị nke ukwuu nke na O zitere Jizọs ka ọ nwụọ n'ihi mmehie anyị na-ezighị ezi. Mgbe anyị na-enweta na-enweta Jesus aghọ vinfrälsta na-azọpụta,
The image si Longjiang-2 bụ naanị 16 kilobytes na size ma were fọrọ nke nta 20 nkeji ibudata. The mbụ image bụ na-acha odo odo ma na agba gbazie na ihe n'ezie na agba.
The n'elu picture e weere site a igwefoto na osisi Chinese DSLWP B / Longjiang-2 satellite. Ọ nwere ike na-akpa picture nke ọnwa azụ ya na ala anyị ka anyị hụrụ ụfọdụ ndị ọzọ Chinese ugboelu , Chang 'e 5T1, nke bụ na otu image were a na foto nke abụọ n'eluigwe na 2014.
Wupu na ọnwa na ụwa
E nwere ndị ọzọ foto nke ọnwa si dị n'akụkụ ma na anyị na-acha anụnụ anụnụ na mbara Ụwa.
On July 5, 2016 The Epic photographed a usoro nke ihe oyiyi si adabaghi na mgbe hụrụ si Earth. N'elu ị ga-ahụ otu n'ime ihe oyiyi nke na-Earth na-n'usoro na ndabere.
Vecka 25, tisdag 18 juni 2019 kl. 05:10